I-Treehouse : Uhlala neMvelo e-Kolad - I-Airbnb
I-Treehouse : Uhlala neMvelo e-Kolad
Kolad / Roha, Maharashtra, i-India
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Shubham
U-94% wezivakashi zakamuva unikeze u-Shubham izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Uma uthanda imvelo khona-ke lena yindawo efanele. Indlu yesihlahla enesitayela sesimanje kodwa esithokomele. Eduze komfula i-Kolad kanye ne-Kundalika odlula eduze kwendlu, umuntu angajabulela ukubukwa komfula nepulazi, ichibi lemvelo elingemuva, indawo enhle yokuhlehla enezinkuni.
Sicela uqiniseke ukuthi ufunda zonke izinto nemithetho yendlu ukuze ugweme ukubhukha okungafunwa. Ulwazi oluningi oluyisisekelo lungezansi, ngokungabaza ungasithinta ngomlayezo.
Njalo ekuseni, amasango amakhulu e-Bhira Dam avuliwe, ephenduka uMfula i-Kundalika ozolile ube yindawo enamanzi amaningi. Ukugwedla phezu kwalo mfula ogqugquzelayo kuyinto ejabulisayo ngempela. Phakathi nenkathi yasehlobo, ukubukeka kwe-Kolad komile futhi kusundu, kodwa amabhange omfula ahlezi eluhlaza okotshani. Phakathi nenkathi ye-monsoon, ukubukeka kwendawo kuguqula okuluhlaza okukhanyayo okuhluka kakhulu nesibhakabhaka esimnyama esipungayo. Futhi phakathi nenkathi yasebusika, uvuka ekuseni okungekuhle, futhi uqede usuku ngobusuku obubandayo.
Sinakekela ukunethezeka kwakho ngokuphelele! Ngaleso simo, sinikeza:
- I-generator, i-AC, i-Wi-Fi
- Ama-geysers, amathawula, izinto zokugeza
- Ikhithi yezokwelapha -
Indawo yokupaka evikelekile yezimoto ezingaba ngu-8
Lena yindlu efanelekela izilwane ezifuywayo.
AMAKAMELO OKULALA - KUNAMAKAMELO OKULALA
angu-2 anendawo evulekile anamagumbi okugezela axhunyiwe.
- i-AC, i-Wi-Fi nokubukwa kuyatholakala kuwo wonke amakamelo.
- Omabili amagumbi ane-patio enamathiselwe enokufinyelela okuqondile otshanini.
- Omabili amagumbi anovulande wangasese obheke umfula.
- Kunamagumbi okugezela angu-3 endlini eyakhiwe esihlahleni.
- Zonke izindlu zokugezela ezinamathiselwe zine-geysers, amathawula nezinto zokugeza eziyisisekelo.
abantu bonke - Igumbi lokudlela lisesitezi esiphansi esakhiweni esihlukile.
- Indawo yokudlela inikeza izihlalo ezinethezekile kuze kufike kubantu abangu-20 futhi ine-Wi-Fi.
- Kunotshani oluhlaza eceleni komzila oholela Endlini Eyakhiwe Esihlahleni. Izivakashi zingaphumula otshanini futhi zijabulele umoya omusha. Izakhiwo zingaphezu kwama-acre angu-10.
- Izivakashi azikwazi ukufinyelela ekhishini.
- Ikhishi lokudlela eline-microwave, isiqandisi, isihlanzi samanzi, i-crockery kanye ne-cutlery.
- Zonke izidlo ze-veg neze-veg zinganikezwa endlini ngemali eyengeziwe engu-Rs. 700/1000/1400 umuntu ngamunye, ngosuku.
- Izidlo ze-barbecue ziyatholakala ngezindleko ezengeziwe zika-Rs. 500 umuntu ngamunye, isidlo
ngasinye. - Ukusetshenziswa kokudla okungekona okwe-vegetarian kuvunyelwe.
imibhede eyidabuli engu- 4, imibhede yenetha engu-1
Balekela ejubaneni nomsindo wedolobha futhi ujabulele uhambo lwezinsuku ezingu-2 oluya e-Kolad oluhlanganisa ukuhamba ngezihlenga emfuleni i-Kundalika ogelezayo. Kulolu hambo, uzohlanganyela kuseshini ye-rafting ubude be-12 km lapho uzolwa nama-rapids e-Grade-II kuya ku-Grade-III+ womfula. Uma ufisa, ungakwazi ngisho nokubhukuda emfuleni ekupheleni kweseshini ye-rafting. Futhi, uzochitha izinsuku ezi-2 epulazini elihle elizungezwe uhlaza oluluhlaza futhi uchithe ubusuku bonke endlini ethokomele yesihlahla.
Izilimi: English, हिन्दी, ਪੰਜਾਬੀ, Español